Tantara: Nankahala Azy Ireo Rahalahin’i Josefa - Tranonkala Ofisialin’ny Vavolombelon’i Jehovah
Nanonofy indroa i Josefa. Tao amin’ireo noﬁn’i Josefa roa dia niondrika teo anatrehany ny rahalahiny. Rehefa nolazain’i Josefa tamin’ny rahalahiny ireo nofy ireo, dia vao mainka nitombo ny fankahalan’izy ireo.
Tamin’izay indrindra no nandalo ny lehilahy isimaelita vitsivitsy. Hoy i Joda tamin’ireo rahalahiny: ‘Aoka izy hamidintsika amin’ny Isimaelita.’ Ary izany no nataon’izy ireo. Namidin’izy ireo sekely volafotsy 20 i Josefa. Fihetsika ratsy sy tsy misy ﬁtiavana re izany!
Fantatr’i Jakoba fa an’i Josefa ilay izy. ‘Novonoin’ny bibidia tokoa i Josefa’, hoy ny ﬁhiakany. Ary izany indrindra no tian’ireo rahalahin’i Josefa hoeritreretin’ny rainy. Nalahelo dia nalahelo tokoa i Jakoba. Nitomany nandritra ny andro maro izy. Nefa tsy maty akory i Josefa. Andeha hojerentsika izay nitranga taminy tany amin’izay nitondrana azy.
Ahoana no azon’ny Kristianina anahafana an’i Josefa, rehefa misy manao ratsy eo anivon’ny ﬁangonana? (Gen. 37:2; Lev. 5:1; 1 Kor. 1:11)
Inona no ﬁhetsika ara-dalàna nasehon’i Jakoba, rehefa nalahelo izy? (Gen. 37:35)